China Amonia Absorption Scrubber N'ihi Industrial Waste Gas Ọgwụgwọ ụlọ ọrụ na-emepụta | Lvran
Amonia Absorption Scrubber N'ihi Industrial Waste Gas Ọgwụgwọ
Ụdị: Vetikal Wet Scrubber
Ngwa: Chemical ụlọ ọrụ wdg
Nha: Ejiri ngwa ngwa na otutu ụdị
Ihe: Eyi / Pee / FRP / Carbon Steel / igwe anaghị agba nchara
Ọcha dị ọcha: 70% -95%
Ebe Mmalite: Mpaghara Zhejiang, China
Ewetara Ọrụ Mbubata: Nkwado teknụzụ vidiyo, Akụrụngwa n'efu, nkwado ntanetị
Ofufe ikuku: Nhazi
Arọ: Ọ dabere
Asambodo: ISO9001-2008 / 2015
Pee Industrial Wet Scrubber N'ihi Acid alụlụ ọcha
Akụrụngwa akụrụngwa: Maka ọgwụgwọ gas na-emebi emebi (dịka acid, gas alkaline gas), nhọrọ nke ngwa ngwa dị ọcha bụ isi ihe iji mmiri mmiri na-etinye gas. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ anyị ejirila aka ha wee mepụta usoro mkpochapu gas na alkaline na akụrụngwa yana arụmọrụ dị elu, arụmọrụ na njikwa dị mfe, na ndụ ọrụ ogologo. Ọrụ ahụ na ngwaahịa a nwere usoro dị mfe, obere ike oriri, njirimara nke ịdị ọcha dị elu yana ụdị dị iche iche, nwere ike wepu hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride gas (HF), amonia (NH3), foogu (- H2SO4) , chromium sulfate acid alụlụ (CrO3), hydrogen cyanide acid gas (HCN), alkali vepo (NaOH), hydrogen sulfide gas (H2S), mmiri soluble gas dị ka formalin.
The acid alụlụ iyuzucha gas na-atara n'ime ọcha ụlọ elu site mbukota oyi akwa. Iyuzucha gas na sodium hydroxide absorption mmiri mmiri na-na kọntaktị zuru ezu, absorption na neutralization mmeghachi omume. Mgbe acid alụlụ iyuzucha gas dị ọcha, ọ na-dehydrated na defogged site alụlụ mwepụ efere na mgbe ahụ atara n'ime ikuku site na onye ofufe. A na-agbanye mmiri mmiri na-adọrọ adọrọ site na mgbapụta na ala nke ụlọ elu ahụ ma na-efesa ya n'elu ụlọ elu ahụ. The acid alụlụ iyuzucha gas mgbe ọcha osobo emission ọkọlọtọ.
Atụmatụ: Akụrụngwa ahụ na-eji ụlọ elu emejupụta ka ọ dị ọcha gasị, nke kwesịrị ekwesị maka ọgwụgwọ nke ikuku na-ekpochapụ gas na-aga n'ihu. Usoro, njikwa, ọrụ na ndozi dị oke mma ma dị mfe, agaghị emetụta mmepụta nke ogbako ahụ; O nwekwara otutu uzo di omimi na ulo oru.
Nhazi:Nke a bụ ihe ọhụrụ - ibe akpụ scrubber tower. Ọ na-emi esịnede mmiri mmiri nchekwa tank, ụlọ elu ahu, ikuku uzo mmiri ngalaba, ịgba oyi akwa, mbukota oyi akwa, swirl defogging oyi akwa, ikuku tinyekwa cone okpu na nnyocha onu.
Ngwa: Ọcha na ọgwụgwọ nke acid na alkaline n'efu gas na-agbanye na usoro nke ụlọ ọrụ kemịkalụ, eletrọniki, metallurgy, electroplating, textile (chemical fiber), nri, igwe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Pee ịkpụzi scrubber uru
1, Nhazi ihe onwunwe, mgbochi ịka nká, mgbochi ultraviolet,, ndụ ruo afọ 15
2, nguzogide corrosion, nwere ezigbo arụmọrụ dị ala karịa ihe PP (- ogo 70), kwesịrị ekwesị maka iji gburugburu ebe obibi dị ala, ọnụ ahịa dị ala, nnyefe ọsọ ọsọ
3, ebu mmepụta ọkọlọtọ, ụlọ elu ahụ na-akpụzi na-enweghị ịgbado ọkụ, ike dị elu, nguzogide mmetụta, mgbochi mgbochi, ụcha 4, ngwa ngwa na-emeghe windo Windows na-etinye n'ime ụlọ elu ịgba ala, ọrụ mwepụ ngwa ngwa slag, mfe mmezi na adaba
Iyuzucha ụlọ elu ụlọ na-ekpocha gas na-agba ọsọ na mmiri mmiri gas. Ike gwụrụ gas na-abanye n'ime ụlọ elu ahụ site na isi mmiri nke ụlọ elu ahụ, gafere akwa mkpuchi site na ala ruo n'elu, ma mesịa mechaa si na mpịakọta nke ụlọ elu elu site na mgbochi mgbochi corrosion. Ngwọta na-anọpụ iche na-agafe site na onye na-ekesa mmiri mmiri n'elu ụlọ elu ahụ, na-efesa ya kpamkpam n'ime akwa ngwugwu, na-agbadata ala nke ngwugwu ngwugwu na ala nke ụlọ elu ahụ, na-agbapụta n'ụlọ elu ahụ site na pipeline, ọ dịkwa na-ekesa site na mgbapụta mgbochi corrosion na-ekesa mgbapụta. Dị ka na-arịgo iyuzucha gas na-agbadata absorbent na-na mgbe nile na kọntaktị na mbukota oyi akwa, ịta nke solute na-arịgo airflow na-na-ala na ala, na mgbe ọ esịmde n'elu ụlọ elu, ọ ruru ndị absorption chọrọ na-atara pụọ n'ụlọ elu ahụ. N'ụzọ megidere nke ahụ, njupụta nke onye na-ajụ ajụ na mmiri mmiri na-agbadata na-arịwanye elu, a na-ezute ọnọdụ usoro ahụ mgbe ọ rutere na ala nke ụlọ elu ahụ, a na-ahapụ ya n'èzí ụlọ elu ahụ.
Nke gara aga: Ala Ahịa Gas Mkpofu Spray Tower Maka Acid Mist Ọgwụgwọ
Osote: Pee eyi FRP ihe mbukota Tower N'ihi ụlọ nyocha umeslọ
Acid Anwụrụ Absorption Tower
Cyclone efere tree Tower
Anu ulo Scrubber
Plastic Towergba Tower
Ezigbo nguzogide okpomọkụ dị elu Nnwale ule ahụ na-ezute ihe chọrọ koodu GB / T13274-9 (-) koodu nchekwa ọkụ, ọ gaghị emebi ma ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu maka awa 24 n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị elu. Elu arụmọrụ na ike ịzọpụta Iji CAD, CFD na ndị ọzọ na usoro nke analysis na nnyocha na mmepe software, na-akwado arụmọrụ ka ukwuu karịa 80%, na ụfọdụ igwe nọmba ndị karịrị 85%, na arụmọrụ usoro bụ ewepụghị, w ...
CQC asambodo ngwaahịa na-anwale ule nke onye ofufe ahụ na-agbaso ụkpụrụ mba GB19761-2009. Ngwa ofufe nwere ike ịgba ọsọ oge niile maka awa 24 na-enweghị mmebi, nwere ogologo ndụ ọrụ, na-echekwa ike ma na-arụ ọrụ nke ọma, na otu akụkụ ahụ na-enwe nrụgide kọmputa na nyocha nje iji melite ike nhazi. Mfe mmezi ọrụ The ojiji nke mmanụ batrị nchọ mmanụ tank echebe biarin na aro isi si corrosive gas, pr ...
Iyuzucha Gas ọcha Coljá lectnakọta ...gba ...
Iyuzucha ụlọ elu ụlọ na-ekpocha gas na-agba ọsọ na mmiri mmiri gas. Ike gwụrụ gas na-abanye n'ime ụlọ elu ahụ site na isi mmiri nke ụlọ elu ahụ, gafere akwa mkpuchi site na ala ruo n'elu, ma mesịa mechaa si na mpịakọta nke ụlọ elu elu site na mgbochi mgbochi corrosion. Ngwọta na-anọpụ iche na-agafe site na onye na-ekesa mmiri mmiri n'elu ụlọ elu ahụ, na-efesa ya nke ọma n'ime akwa ngwugwu, na-agbada n'elu pac ...
Low Price Gas Mkpofu Towergba Tower N'ihi Acid Mis ...
Pee eyi FRP ihe mbukota Tower N'ihi ụlọ nyocha umeslọ
1. Tower body bodylọ elu ahụ bụ nke mgbochi corrosion Pee, mgbochi ịka nká, mgbochi ultraviolet, ọ naghị agbanwe agba maka ọtụtụ afọ, ma nwee ndụ ruo afọ 15. Ọ na-eguzogide ọgwụ dị ala (-70 ℃) karịa PP. Enwere ike iji ya na gburugburu ebe dị ala ma dịkwa ọnụ ala. Oge nnyefe dị mkpirikpi na nnyefe ọsọ ọsọ; etozu ebu mmepụta, ịgba ụlọ elu ozu akpụ enweghị ịgbado ọkụ, elu ike, mgbochi nkukota, mgbochi-cracking, mgbochi leakage; kwadebe ...
Centrifugal duct Fan, Nnukwu nrụgide Centrifugal Fan, Radial Agụba Centrifugal Fan, Iyuzucha Fan, Anu ulo Scrubber, Single Inlet Centrifugal Fan,